ဤမြေ၏သွေးသားများ - Goethe-Institut
Orang Asli သည် မလေးရှားဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသောလူမျိုးစုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် မြို့ပြ၏အခြားတဖက် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်များ ဝန်းရံထားသည့် သေးငယ်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း နေထိုင်ကြသည်။
၎င်းတို့၏ရိုးရှင်းသောဘဝနေထိုင်နည်းလမ်းစဥ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်း ပြဿနာများနှင့် ကင်းကွာနေသည်တော့မဟုတ်ပေ။ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကန့်သတ်ဖယ်ထုတ်ခံရခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများကို မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုမသိဘဲထိခိုက်ခံရခြင်း၊ စသည်တို့ဖြင့် ၎င်းလူမျိုးစုမှာဖိနှိပ်ခံနေရပြီး၊ သမာရိုးကျဖြစ်နေသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်း ခံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာများစွာကိုထိခိုက်စေသည့် အရေးပေါ်ပြဿနာဖြစ်ပြီး၊ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာမှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရကြရပြီး အပြစ်မဲ့သည့်ရွာသူရွာသားများအား ၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှ လျော်ကြေးမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်ခံရခြင်း၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေများကိုသိမ်းယူခံရခြင်းများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
အချို့က၎င်းအခြေအနေကို လောကဓံရိုက်ခတ်မှုအဖြစ် လက်ခံလိုက်ကြသော်လည်း အချို့ကမူ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ပေသည်။ Orang Asli လူမျိုးစုမှလူငယ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်နှင့် အိပ်မက်များရှိသည်။ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့်
၎င်းတို့၏အသံကို အလေးအနက်ထားစေရန်အတွက် ကနဦးကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်လိုကြောင်း သဘောထားကို လူငယ်အချို့ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုသူများထဲမှတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် “ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူ” ဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းရပါမည်လား? တချိန်ချိန်တွင် ၎င်းလူမျိုးစုအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင် တူညီသောအခွင့်အရေးများ ရရှိနိုင်ပါမည်လား?
လတ်တလောအခြေအနေမှာမည်ကဲ့သို့ဖြစ်စေကာမူ ၎င်းတို့ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဟူသောအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ လူငယ်များမှာ ကြောင့်ကြစိုးရိမ်မှုမရှိကြပေ။ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ (Identity) ကို အပြည့်အဝလက်ခံပြီး တနေ့တွင် ၎င်းတို့လူမျိုးစု ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများကို မူလပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
Elliott Koon *၁၉၈၀၊ မလေးရှား
© Elliott Koon Elliott Koon သည် ကွာလာလမ်ပူတွင်နေထိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် (၂၀၁၅) ခုနှစ် Obscura Festival အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သည်။ သူ၏လက်ရာများကို အဖြူအမည်းကာလာဖြင့် Street Photography, Mononami၊, Fine Art Tokyo, Street View Photography, Ricoh GR Photography Community နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် အွန်လိုင်းပြသထားသည်။
ကွာလာလမ်ပူရှိ Dream Center တွင်လည်း (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏လက်ရာများပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် သူ၏လက်ရာများကို Photo VOGUE Italia နှင့် Baccarat မဂ္ဂဇင်းတို့တွင်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် Nikon Photo Week Malaysia မှ ၎င်း၏လက်ရာကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် သူ၏ဂျပန်ဓာတ်ပုံများမှ တစ်ပုံကို "လမ်းပေါ်တွင်ရိုက်ကူးခဲ့သောအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ ၃၀" စာရင်းထဲသို့ ရွေးချယ်ခံရပြီး ရုရှားဝက်ဘ်ဆိုက် rosphoto.com တွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။